Kubulawe umsizi wasendlini abaqashi bakhe beseholidini | News24
Kubulawe umsizi wasendlini abaqashi bakhe beseholidini
ohannesburg – Kubulawe umsizi wasendlini eLittleton, ePitoli, abaqashi bakhe beseholidini, kusho amaphoyisa ngoLwesihlanu.
Kusolakala ukuthi lo wesifazane ugwazwe ngesikhali esicijile esitholakale endaweni yesigameko, kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Daniel Mavimbela. "Umufi utholwe ngabaqashi bakhe befika njengoba baya eholidini kusukela ngoLwesihlanu olwedlule," esho.
Kuvulwe amacala okubulala nokuphanga njengoba kusolakala ukuthi kwebiwe i-laptop ne-tablet kulo muzi, kusho uMavimbela.
OLUNYE UDABA: Kubulawe iphoyisa esitolo esidayisa u-Ice Cream
"Amaphoyisa awanakungabaza ukuthi imbangela yalesi sigameko izokwazeka kundekudala," esho
Uthe amaphoyisa eTshwane Central Cluster azibophezele ekuqedeni nya ngobugebengu obuhambisana nodlame, ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane ngokuthi kuboshwe abenzi bokubi ukuze kuqinisekiswe ukuthi lezi zigameko aziphinde zenzeke.
"Naleli cala ngokunjalo, abenzi bobubi bazojeza," esho.
UMavimbela unxuse noma ngubani ongaba nolwazi olungaholela ekutheni kuboshwe abasolwa ngokushesha ukuba ashayele iCrime Stop ku-08600 10111.